musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Canada Yakagadzirira Kuita Nyowani Yekudzivirira Policy
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Hurumende yeCanada chiziviso chekuti vashandi vanogadziriswa mumubatanidzwa mune zvekutakura vanofanirwa kubaiwa zvakakwana kuCVV-19 naGumiguru 31, 2021.
Hurumende yeCanada yakurudzira kuenderera mberi nekutora kurudziro yayo COVID-19 kuraira kwepaneru.
Air Canada yakatsigira uye inoramba ichitora sainzi-yakavakirwa matanho ekuchengetedza vatengi vayo nevashandi vakachengeteka.
Air Canada yakazvipira kushanda nemubatanidzwa wayo uye Hurumende yeCanada kuti ishandise mutemo uyu mutsva.
Air Canada nhasi yaburitsa chirevo chinotevera ichipindura chiziviso cheHurumende yeCanada chekuti vashandi vanogadziriswa mumubatanidzwa wezvekutakura vanofanirwa kubaiwa jekiseni rakazara ku COVID-19 naGumiguru 31, 2021.
Kubva pakatanga denda, Air Canada yakatsigira uye nekuramba ichitora masainzi-based matanho ekuchengetedza vatengi vayo nevashandi vakachengeteka. Izvi zvave kusanganisira kukurudzira vashandi vayo kubayiwa majekiseni, kumisikidza makiriniki emubasa uye kutsigira zvirongwa zvekudzivirira nharaunda kuitira kuti majekiseni awanikwe zvakanyanya.
kunyange zvazvo Air Canada yakamirira zvimwe zvakawanda nezve chiziviso chanhasi pamusoro pekudzivirira majekiseni, inhanho inotambirwa kumberi mukuchinja kwenzira dzekuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevashandi vendege, vatengi uye vese maCanada.
Air Canada yakazvipira kushanda nemubatanidzwa wayo uye iyo Hurumende yeCanada kuita ino mutemo nyowani nenzira inoshanda nechinangwa chekuwedzera kuchengetedzeka uye kugadzirisa mashandisirwo ezvesainzi-based health uye kuchengetedzeka matanho nenzira inoenderana neHurumende yeCOVID-19 Kuedza uye Kuongorora Nyanzvi Advisory Panel mushumo waMay 5, 2021.
Kunyanya, kune vafambi, panhanho yakakurudzirwa: kuti hapafanire kunge paine pre-kuenda kuedzwa kwevakazara vakabaiwa vafambi; kubvuma kuti kuyedzwa pakusimuka nekusvika kwakanyanyisa kune ava vafambi; uye iyo inoshanda yega-inoitiswa nekukurumidza antigen bvunzo dzave kuwanikwa dzinogona zvakachengeteka kutsiva inononoka uye inodhura PCR kuyedzwa kwekutanga-kuenda bvunzo.
Air Canada zvakare inoramba yakazvipira mukuenderera mberi kuvandudza uye kushandiswa kweatsva matanho ekuchengetedza uye maitiro anoshanda uye ari nyore kune vatengi sezvavanowanikwa. Matanho akadaro akakosha pakutangazve kwakachengeteka kwemaindasitiri ekufambisa nendege ayo, kunze kwekugonesa maCanada kufamba akasununguka, zvakare mutyairi wezviitiko zvehupfumi muCanada.